TOP NEWS: Dhageyso Galmudug oo ku dhawaaqay in ay xiriirka u jartay mid kamid ah wasaaraddaha xukuumadda ra’isul wasaare kheyre | Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Dhageyso Galmudug oo ku dhawaaqay in ay xiriirka u jartay mid kamid ah wasaaraddaha xukuumadda ra’isul wasaare kheyre
Saturday May 20, 2017 - 1:16 under Somali News by Tifaftiraha K24
Maamulka galmudug ayaa eedeeyn kulul usoo jeedisay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomalia .
Wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegtay in wasaaradda waxbarashada dowaldda federaalka aysan wax dhaqaalo ah soo gaarsiin maamulka galmudug taasina ay tahay mid galmudug looga hiiliyay maamulada kale.
Wasiir Ku Xigeenka Wasaarada Waxbarashada ee Maamulka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqoow in wasaaradda waxbarashada dowaldda federaalka ay u kala hiilisay maamulada dalka ka jira taasina ay tahay mid cadaalad daro ah.
Wasiir ku xigeenka wuxuu ka dhawaajiyay in si KMG ah ay galmudug u joojisay xiriirka ay la leedahay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka.
” Waxaan go’aansanay in aan si KMG ah wada shaqeyntii wasaaradda waxbarashada u joojinay ilaa laga xaliyo ama ay wasaaradda garwaaqsato waxa aanu ka cabaneyno” ayuu yiri wasiir ku xigeenka.
Maanta oo sabti ah ayaa guud ahaan dalkalooga fariistay imtixaanaadka mideysan ee dugsiyada sare ah waxaana u fariistay in ka badan 23 kun oo arday ah oo sanadkaan ka qalin jabineysa dugsiyada sare ee dalka.